I-HD Foot Valve
Amaphayiphu ezinyawo akhiqizwa ngokuphelele ngezinto zepulasitiki ezimelana kakhulu futhi ahlala enezakhi zensimbi engagqwali, okuvumela ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwazo zonke izinhlobo zezimo zokusebenza. Konke lokhu kanye nokusetshenziswa ekwakhiweni kwayo kanye nokuqina kwayo kwe-modular, kwakha into ebalulekile ekwakhiweni kwezinsiza zayo.
Indawo Yomsuka: I-Hebei, China
I gama le-brand: AmaGreenplains
Isicelo: Jikelele, Ezolimo Irrigation
Ukusetshenziswa: Uhlelo Lokunisela Amanzi
Ubuchwepheshe: Ubuchwepheshe Obonga Amanzi
Imbobo: I-Tianjin, China
Usayizi: 2 "- 4"
I-HD Foot Valve - Intambo yabesifazane 2 ″ -4 ″
HD Izinyawo Valve -Socket 110-200
1. Impendulo esheshayo, esebenza kahle, neyobungcweti kungakapheli amahora angama-24, amahora angu-14 wezinsizakalo ezenziwa online.
2. Iminyaka eyi-10 yesipiliyoni sokukhiqiza emkhakheni wezolimo.
3. Ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nesisombululo ngunjiniyela omkhulu.
Uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi nethimba, idumela eliphakeme emakethe.
5. Uhla oluphelele lwemikhiqizo yokunisela yokuzikhethela.
6. Izinsizakalo ze-OEM / ODM.
7. Yamukela isampula yoku-oda ngaphambi kweMisa Order.
Langaphambilini PVC Hlola Valve
Olandelayo: Hlunga Y uhlobo-Isikrini
1. Ingabe uyinkampani yokukhiqiza noma yokuhweba?
Singumkhiqizi owaziwayo wezinhlelo zokunisela emhlabeni ezineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni somkhakha.
2. Ngabe unikeza insizakalo ye-OEM?
Yebo. Imikhiqizo yethu isuselwa kuGreenPlains Brand. Sinikeza insizakalo ye-OEM, ngekhwalithi efanayo. Ithimba lethu le-R & D lizoklama umkhiqizo ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
3. yini i-MOQ yakho?
Umkhiqizo ngamunye une-MOQ ehlukile, Sicela uxhumane nokuthengisa
4. Iyini indawo yenkampani yakho?
Akhiwe Langfang, HEBEI, ECHINA. Kuthatha amahora amabili ukusuka eTianjin kuya enkampanini yethu ngemoto.
5. Ungasithola kanjani isampula?
Singakuthumelela isampula mahhala futhi impahla iqoqwe.
Plastic Unyawo Valve
PVC Single Hlola Valve
Swing Hlola Valve
Esilucwecwana Swing Hlola Valve